ဒေါ်ဂျနီဖာတင်လေး သည် မြန်မာ့အားကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကာ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အအောင်မြင်ဆုံး အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အားကစားလောကတွင် ပံ့ပိုးမှုနည်းပါးနေချိန်တွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုပေါင်းများစွာ ရယူနိုင်ခဲ့သော အားကစားသမားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နှစ်၂၀ကျော်အတွင်း နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ် ၁၇ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၃ခုနှင့် ကြေးတံဆိပ် ၁ခုရယူပေးနိုင်ခဲ့သည်။
1. ငယ်ဘဝနှင့် မိသားစု
2.1. အားကစားသမားဘဝ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
2.2. အားကစားသမားဘဝ ဘော်လီဘော
ဂျနီဖာတင်လေးသည် ဘော်လီဘောကို စတင်ကစားခဲ့သည်။ ၁၉၆၄-၁၉၆၅ခုနှစ်များတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ပွဲများတွင် ဧရာဝတီတိုင်းလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့်အတူ ကစားခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံးရိုက်အား ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ၏အသင်းသည်လည်း တံခွန်စိုက်နှင့်ဒိုင်းရရှိခဲ့သည်။၁၉၆၉ ရန်ကုန်ပွဲတော်တွင် သံလုံးပစ်အားကစားနှင့် ဘော်လီဘောအားကစားနည်း၂ခုတို့တွင် ရွှေတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့သည်။
2.3. အားကစားသမားဘဝ ပြေးခုန်ပစ်
2.4. အားကစားသမားဘဝ ဂေါက်သီးရိုက်
2.5. အားကစားသမားဘဝ အားကစားစိတ်ဓာတ်